Hawaii COVID oo Xakamaysan & La Kulmay Diiwaanka Dalxiiska & Aamusnaanta
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Jabinta Hawaii » Hawaii COVID oo Xakamaysan & La Kulmay Diiwaanka Dalxiiska & Aamusnaanta
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Jooji shirkadaha diyaaradaha si ay u bilaabaan duulimaadyo cusub Hawaii
Dalxiiska Hawaii wuxuu qabaa dhibaato caafimaad oo aan cidina doonayn inay ka hadasho. Soo-booqdayaasha ku imanaya tirooyinka rikoodhka ah ayaa gobolka u keenaya dakhli aad loogu baahan yahay, sidaa darteed waxay u muuqataa in dhibaatadan caafimaad aysan ahayn inay wax beddesho. Ku soo dhawow qof aad u xanuunsan Aloha Gobolka. Aynu rajaynno in dhammaan booqdayaasha la tallaalo. Socotada Hawaii, xaji oo u diyaar garow safar caafimaad oo nololeed.
Guddoomiyaha Gobolka Hawaii Ige wuu diiday inuu ka jawaabo eTurboNews iyo Hawaii News Online.
Duqa magaalada Honolulu Rick Blangiardi wuu aamusan yahay, isaga oo ka soocaya su'aalaha aan raaxada lahayn eTurboNews.
Maareeyaha Hay'adda Dalxiiska Hawaii John De Fries iyo Maareeyaha Ururka Lodging iyo Dalxiiska Hawaii Mufi Hannemann ayaa ka fogaanaya su'aalaha tan iyo markii COVID-19 ay arrin u noqotay warshadaha booqdayaasha Hawaii.
COVID-19 wuxuu ka taliya Hawaii, laakiin dalxiiska ayaa la socda socodka. Hoggaamiyeyaasha dalxiisku waxba uma sheegaan martida. Soo -booqdayaasha noocan ahi waa inay welwel ka sii yeeshaan maalinta. Welwelkan waxaa la kulmay aamusnaan kuwii loo doortay inay hoggaamiyaan.
Aamusnaanta waa jawaab badbaadin waji ah oo lagu yaqaan dhaqamada Aasiya, taas oo macnaheedu yahay in ganacsiga PR uu yahay sida caadiga ah ee Hawaii.
Lix maalmood ka hor, daabacaadan ayaa soo sheegay tirada rikoorka ee abid laga diiwaan galiyay COVID-19 kiisaska Hawaii. Tiradani hadda waa korodhka labaad ee ugu sarreeya, oo diiwaanka cusub ee maanta ayaa ka dhigan guul kale oo fayraska ah.
Iyadoo la tixgalinayo 53.7% dadka ku nool Hawaii ayaa hadda si buuxda loo tallaalay, 71.7% waxay heleen ugu yaraan hal tallaal oo ah Pfizer ama Moderna, caabuqyada cusub ayaa xitaa ka sii cabsi badan maadaama ku dhawaad ​​dhammaantood ay ka mid yihiin 46.3% aan weli si buuxda loo tallaalin. Xitaa xilligii ugu xumaa ee masiibada, tirooyinka noocaan ah laguma arag gobolka.
Xitaa markii dalxiiska iyo dhaqaaluhu ay istaageen kahor Oktoobar 15 -keedii sanadkii hore, tirooyinka caabuqa noocan oo kale ah xitaa uma dhoweyn waxa Hawaii ay hadda la kulanto.
Mid ayaa ku doodi kara 8 kiis oo kaliya ayaa lala xiriirin karaa socdaalka shalay, laakiin waxa aan la soo gudbin ayaa ah in 61 kiis oo kaliya lala xiriirin karo faafitaanka bulshada, laakiin boqolaal kiis oo dheeri ah, taasoo ka dhigaysa inta badan kiisaska oo dhan sabab aan la garanayn.
Sida ay ahayd dhammaan mashaakilka, the Maamulka Dalxiiska ee Hawaii wuu aamusan yahay, oo hadda aamusnaantaas waxaa ka dhawaajiyay Guddoomiye Cige, Maayarrada, iyo cid kasta oo kale oo xil haysa.
Ku dhawaad ​​30,000 oo soo -booqdeyaal ah ayaa maalin kasta imaanaya Hawaii, maqaayadaha waa furan yihiin, waji -xidhka iyo fogeynta bulshada ayaa u muuqda kuwo aan muhiim ahayn.
Waxaa la yaab leh, mid ayaa dhihi kara dhaqaaluhu wuxuu hormuud u ahaa caafimaadka, laakiin Hay'adda Dalxiiska ee Hawaii waxay ku mashquulsanayd sidii ay u heli lahayd wadiiqooyin lagu niyad jebiyo dalxiiska ballaaran.
Sababta taasi maahan COVID-19 laakiin waa ilaalinta arrimaha dhaqanka iyo isbedelka cimilada.
Kiisaskii ugu dambeeyay ee COVID-19 ayaa laga soo sheegay Dowladda Aloha Gobolka, 655 kiis oo cusub oo ah COVID-19 Hawaii ayaa wadarta guud ka dhigaysa 44,617 (ilaa 1.4% maalintii hore). Tani waa tiradii ugu badnayd ee kiisaska la diiwaan geliyo hal maalin weli.
Sida laga soo xigtay Lt. Gov. Josh Green, kor u kacaani waxaa sabab u ah Delta Variant. Natiijo toos ah, isbitaallada la dhigo ayaa sii kordhaya sidoo kale maanta waxaa la helay 166 oo lagu daweynayo isbitaal, heerka wax -qabad ee 6.89%.
Ilaa hadda, 1,883,809 COVID-19 tijaabooyin ah ayaa la sameeyay 42,439 taas oo dhalisay akhrin togan oo calaamadisay heerka wax-ku-oolnimada maanta oo ah 6.9%.
Hadda, celceliska kiisaska maalinlaha ah waa 437.6. Waxaa jiray 4,391 xaaladood oo la soo sheegay 14kii maalmood ee la soo dhaafay. Wadarta dhimashada ilaa maanta waa 538 (1.2%).
Burburka kiisaska maanta waa:
Gobolka Hawaii: 131
Degmada Maui: 69
Degmada Kauai: 7
Illaa iyo hadda adduunku wax walba waa hagaagsan yahay. Xeebaha, hoteellada, iyo duulimaadyadu waa buuxaan. Booqdayaasha badanaa lama arko iyagoo xiran maaskaro waxayna waqti fiican ku qaadanayaan xeebta, maqaayadaha, barkadda, meelaha lagu caweeyo, iyo meelaha soo jiidashada leh.
Qof kasta oo ku nool gobolka Waikiki wuxuu maqlaa seeriga ambalaaska hadda si joogto ah 24/7, sariiraha isbitaalka ayaa buuxsamaya, laakiin tirada dadka la tallaalay awgood, heerka dhimashada, nasiib wanaag, weli waa mid aad u hooseeya.
Ma jiraan wax xaddidaad ah oo ku jira dhuumaha? Uma badna, sida uu tilmaamayo Guddoomiye Cige.
Rebac wuxuu leeyahay,
Ogosto 11, 2021 markay tahay 09:30
131 qof oo ku nool Jasiiradda Big Island ayaa qaba hargab… aniga iima muuqato xaalad degdeg ah. Badankood iskood bay u fiicnaan doonaan kadibna waxay u sii wadan doonaan noloshooda sida dhammaanteen aan yeelno. Looma baahna xidhitaanno, maaskaro ama fogeyn bulsheed - waxaan joognay kuwa sannad ka badan mana shaqeeyaan.
dib u eegis wuxuu leeyahay,
Ogosto 6, 2021 markay tahay 17:44
Maybi waxaad ka buuxsantay qashin aad faafinayso macluumaad khaldan Waxaan ku noolahay Jasiiradda Weyn waxaanna waayey 4 qof si aan iigu warramo sida ay beenta u tahay marka dadku maalin walba saamayn ku yeeshaan heer aad u sarreeya doqon aan wejigiisa xidhnayn doqon ma doorto si loogu tallaalo heerkaan waxaan mar kale xirnaan doonnaa mahadnaqa nacasyada sida adiga oo kale oo faafinaya warar qaldan
Ogosto 6, 2021 markay tahay 01:04
Jasiiradda Weyn waxay lahayd kororka labaad ee ugu weyn maanta, laakiin waxaan oggolahay inay tahay meelo bannaan oo ballaaran- ma aha sida Waikiki ama Oahu guud ahaan.